Keenista Ciidan Shisheeye: sii kordhin colaadda raagtay ee Soomaaliya mise bilow xal nabadeed?
MA in International and European Legal Studies
Wadanka Soomaaliya waxaa hayey daganaasho la 'aan xagga siyaasadda ah ugu yaraan rubuc qarinigii ugu dambeeyey. Degenaasho la'aantaas waxa ay aad uga sii dartay iskuna badashay dagaal qabiil iyo kala jajab ku yimaada wadanka, markii ay dhacday dowladdii milatarigu majaraha u hayey. Dowlad la'aanta Soomaaliya ka dhacday waxaa ka faa'idaystay waddammo badan oo aad usoo dhexgalay arimaha Soomaliya iyada oo mid walba doonayso in ay siyaasadda Soomaaliya u qaabayso si ay danteeda ku jirto. Dowladahaas waxa ay kala adeegsanayeen dad Soomaaliyeed oo iyaguna dan mooday in ay fuliyaan danaha dowladahaas, kuna hamminayey in ay sidaas dantooda ku gaaraan.
Xarigjiidkaas siyaasadda oo aan dhamaadka lahayn waxaa ugu dambeeyey dhismihii dowladda Kumeelgaarka Federaalka ee Soomaaliya, oo lagu aasaasay Kenya. Madaxweynaha dowladdaas -oo kamid ahaa ragga isku hertinayey masraxa siyaasadda Soomaliya waqtiga dheer- ayaa waxa uu isla markii la doortay codsaday ciidammo shisheeye oo la keeno, haba ugu horeeyeen kuwa Itoobiya. Dalabkaas ayaa dadka siyaabo kala duwan uga jawaabay, inkasta oo diidmada ciidanka ka socda dowladaha dariska ah wax garadka inta badan isku mowqif ka noqdeen.
Qoraalkan gaaban waxaan rabaa in aan ku falanqeeyo waxa ay ku soo kordhin karto keenis ciidan shisheeye arimaha Soomaaliyeed oo dhabaqsan. Waxaan kale oo aan il gaar ah ku fiirin doonaa in ay tahay arrin wanaagsan in wadanka lakeeno ciidan ka socda dowladaha safka hore gaar ahaan Itoobiya, iyo cawaaqibka ay keeni karto haddii lakeeno. Waxaan ugu dambaysiin doonaa gabo gabo iyo talo bixin ku wajahan arintaas.
1. Ciidan shisheeye maxay ka qaban karaan dhibaatada Soomaaliya?
Guud ahaan laba hab ayaa ciidan shisheeye kusoo gali karaa waddan madax bannaan.Tan koowaad waa hab heshiis ah. Tan labaadna waa in uu ku yimaado si xoog ah iyada oo ayna jirin wax heshiis ah oo sal u ah. Qaabka hore oo aan sheegay in ciidan kusoo gali karo wadan waa qaab heshiis ah oo dowladda wadanka ama qaybaha dagaalaya oo dhami ay ugu casuumaan ciidankaas hab waafaqsan sharciga wadanka ciidanka lakeeni rabo.
Tan dambe oo ah duulaanka ciidan dibadda kayimaada, waxa ay sababtaa dagaal ay iskaga horyimaadaan wadanka soo duulay iyo dadka lagusoo duulay. Tusaale waxaan usoo qaadan karnaa dagaalkii Maraykanku ku qaaday Ciraaq. Dagaalka nuucaan ah waa mid aan sharci ahayn haddii aan golaha amaanka laga haysan ogolaasho. Maqaalkaygan ugama hadlayo dagaalka uu ciidanku habka sharci darada ah kusoo galo wadanka oo waxaan ku koobayaa kan ku dhaca habka heshiiska ah.
Shaqooyinka uu qabto ciidankan heshiiska ku yimid waxaa kamid ah in uu kala dhexgalo laba kooxood oo dagaal u dhexeeyo oo uu ka shaqeeyo xabad joojin. Ciidankan waxaa loogu yeeraa ciidan �nabad ilaalin�. Ciidankan nabadda ka dhex ilaalinaya labada kooxood xabadda isla horfadhiya waa in uu noqdaa mid dhex dhexaad ka ah kooxaha is haysta. Shaqada ciidamadaasi waxa kali ah oo ay tahay in la joojiyo dagaalka ama rabshada soconaysa; in ay kormeeraan hirgalidda xabad joojinta. Marka ay joogsato xabaddu ayaa laysku dayaa in la wada hadashiiyo kooxihii is dagaalsanaa oo arinta loo raadiyo xal nabadeed. Tallaabadaasna waxaa loogu yeeraa �nabad samayn�. Marka ay taasi hirgasho oo lakala saxiixdo heshiis nabadeed ayaa waxaa la qaadaa tallaabooyin lagu xoojinayo nabadda sida: isku soo dhaweynta dadka; yaraynta cabsida ay kala qabaan dadku. Talaabadaanna waxaa loogu yeeraa �babad dhisid�.
Maadaama aan ogaanay shaqada kala duwan oo ay qabtaan ciidamada shisheeye, bal aan fiirinno shaqada ciidanka shisheeye oo Soomaliya loo dalbay ay qaban karaan iyo booska u bannaan. Sida aan ognahay hadda ma jirto dagaallo waaweyn oo Soomaaliya ka socda oo u dhexeeya kooxo xabad isla hor fadhiya, marka ciidankani ma noqon karo mid nabad ilaalin oo xabad joojin xoojiya.
Tan kale, aan kasoo qaadno in nabad-samayntii ay ka dhacday dalka Kenya oo heshiiskii loo fadhiyey inta ka badan labada sanadood layskugu soo dhaweynayey qaybaha kala duwan oo Soomaalida� in kasta oo aan xaqiiqada ognahay in ayna meeshaas ka dhicin dib u heshiisiin buuxda oo ay ahayd qorshe ay hal koox (SRRC) awoodda gacanta loogu galiyey. Maaddaama ay inta badan kooxaha hubka haystaa ku wada jiraan dowladda , taasi waxa ay keenaysaa in aan loo baahnayn ciidan nabad samayn ah oo ka dhaadhiciya in kooxaha dagaalayaa ay saxiixaan heshiis xabad joojin ah. Shaqaddii laga rabay ciidankan iyo diblomaasiyiinta lasocda waxaa lagu qabtay Kenya. Haddii kale waa in laqirtaa in shirkii muddada dheer loo fadhiyey Kenya uu ahaa riwaayad shacabka loo jilayey.
Marka waxaa noosoo baxaya in shaqada ciidamada shisheeye oo Soomaaliya laga dalbay ay noqon karto hal mid oo ah �nabad dhisid� oo ah in ay ka qayb qaataan in ay xoojiyaan is-aaminka kooxaha dhexdooda; isku soo dhaweynta qaybaha kala duwan; abuurid iyo soo celin kalsoonida shacabka. Shu'aashu waxa ay noqonaysaa Soomaaliya ma looga baahan yahay ciidan shisheeye oo shaqo nabad dhisid ah qabta?
1.1 Ciidan shisheeye oo nabad-dhisid
Waxaa xaqiiqo ah in ay kooxaha Soomaalida ka dhexjirto is-aamin darro iyo cabsi ay koox walba ka qabto tan kale. Habka kali ah oo lagu soo celin karo kalsoonida iyo is-aaminka waa in la hirgaliyo dib u heshiisiin ballaaran oo daacad ah. Haddii ay taasi dhacdo waxaa la tababari karaa ciidan uu leeyahay qaranka Soomaaliyeed. Ciidankaas qaran ayaa si buuxda u hanan kara nabadaynta wadanka, kaas oo ku guulaysan kara kalsoonida Shacabka Soomaaliyeed oo dowladda u hamiin qaba. Inta laga dhisayo ciidan qaran, aniga waxaan aamin sanahay in loo baahan karo ciidan shisheeye oo qabta ilaalinta goobaha muhiimka ah ee dowladda, ilaalinta ilaha dhaqaalaha sida gegooyinka diyaaradaha iyo dakadaha. Ciidankaas keenistoodu waa in ay soo buuxiyaan shuruudaha soo socda:
- Waa in la helo ogolaashaha labada gole ee dowladda (golaha wasiirada iyo barlamaanka).
- Waa in ay ahaadaan ciidan ka socda waddammo dhexdhexaad ka ah arrimaha Soomaaliya oo aan ku soo lug-yeelan dagaalladdii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay.
- Waa in ciidankaas uu ku soo galaa waddanka ogolaashaha Golaha Ammaanka ee Qaranmada Midoobay, iyada oo si wanaagsan loo qeexayo shaqadooda.Taliska guud oo ciidankan waa in in uu hoos yimaadaa Qaramada Midoobey.Taasi waxa ay fududaynaysaa in dhibaatada ay gaystaan si sahlan looga xisaab tami karo. Waxaa kale oo ay fududaynaysaa in marka laga maarmo la dalban karo in ay waddanka kabaxaan.
1.2 Ciidanka shisheeye ma ka samayn karaan Soomaaliya hub-ka-dhigis?
Qayb kamid ah maamulka Dowladda Federaalka Ku-meelgaarka Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku doodayaan in ay ciidanka u isticmaalayaan in ay hubka ka qaadaan kooxaha hubaysan ee Soomaaliya. Sida la ogsoon yahay inta badan kooxaha kala duwan oo hubka waaweyn ku haysta waddanka waxaa ka dhexjira is aaminaad la'aan baahday. Sidaas darteed hubka dhigiddiisa waa in lagu gaaraa dib-u-heshiisiin dhamaystiran oo dowladdu hirgaliso. Waxaa iyadana loo baahan yahay in laga fakaro qaab kooxaha oo dhan qancin kara oo hubka layskaga dhigo. Waa xaqiiqo iyada oo aan arinta hubka xal loo helin in ay adkaanayso in la helo dowlad shaqaysa.
Waa arin aan macquul ahayn aanna laga fiirsan in maamulka sare ee dowladdu yiraahdaan waxaan keenaynaa ciidan kooxaha aan iska soo horjeedno hubka ka dhiga. Waxaan u arkaa in ciidan shisheeye iyo mid gudeedba ayna fulin karin in kooxo hub isku sita, koox kamid ahi mid kale ku qasabto in ay hubkeeda u dhiibto. Haddii taas laysku dayo waxaa imaan karta in xaaladda dalku sii murugto oo ay billowdaan dagaallo qabiil mar kale- taas oo ah midda kaliya oo ay raadinayaan cadowga Soomaaliyeed. Waa in ayna koox kamid ah kooxaha Soomaliya ku riyoon in ay kuwa kale muquuniso iyada oo isticmaalaysa ciidan shisheeye. Ciidanka shisheeye oo qaabkaas ku yimaada waxa uu ka mid noqonayaa qaybaha dirirtu ka dhaxayso mid ka mid ah, waxayna sii murjinayaan xaaladda awalba qasneed ee dalka. Ciidamaddii lakeenay wadanka bilowgii shagaashameeyaddii waxaa ugu weynaa sababihii ay u guuldaraysteen iyaga oo aan dhex dhexaad ka noqon khilaafkii wadanka ka taagnaa, taas oo keentay in kooxaha qaar la dagaallamaan. Dagaalkaas waxa uu sababay burbur hor leh, xaaladda siyaasadana wuu sii adkeeyey, iyada oo aan lgu gaarin wax xal ah.
Waxaa dalka iyo dadkaba dani ugu jirtaa in la raadiyo nidaam caddaalad ah oo hubka looga bixiyo gacanta shacabka oo ay dowladdu kula wareegto. Waa in la helaa qaab waddanka oo dhan hal mar hubka loo wareejinayo iyada oo lagu wareejinayo dad lagu kalsoonyahay si ayna u imaan in gobol ama koox ay u gasho cabsi ah in iyaga kali ah hubka laga qaadayo. Waxaa habkaas lagu gaari karaa iyada oo gobol walba loo ogolaado in uu qorto ciidamo kasoo jeeda gobolkaas oo hubka gobolkaas yaalanna gacantooda la galiyaa. Ciidankaas waxa ay hoos immaanayaan amarka dowladda. Taasi waa qaab looga maarmi karo ciidan shisheeye oo dalka yimaada. Ciidanka qaabkaas lagu dhisay waxaa sahlan in laysku dhafo waqti ka bacdi oo laga dhigo hal ciidan marka ay kalsoonida iyo nabaddu soo noqoto.
2. Guud ahaan ma haboon tahay in ciidan deriska ah lageeyo wadan dagaal kajiro?
Guud ahaan waxaa la ogaaday in ayna haboonayn in ciidamo ka socda wadamada deriska la ah wadan dhib kajiro ay ka qaybqaadan ciidanka shisheeye oo la rabo in waddankaas lagu caawiyo. Waxaa taariikhda ku cad in ciidamada derisku markii ay galaan wadan ay kordhiyaan dhibaatada siina murjiyaan xaaladda siyaasadda. Waxaa laga digaa in ay ciidankaas loo adeegsdo waddamada deriska ah sababaha soo socda dartood:
Waxa ay ka leeyihiin waddanka dhibtu kajirto dano badan. Sida marar badan dhacda waxaa laga yaabaa in wadanka dhibku ka jiro ay waddamada dariska kala dhaxayso muran xagga xuduudda ah iwm.
Waxaa laga yaabaa in waddamada kala duwan ee deriska ahi ay dano kala duwan ka leeyihiin wadankaas oo ay iyaguba is qabqabsi ka bixi waayaan in ay wax caawiyaan iskaba daaye. Taasina ay keento in uu wadankii la rabay in la caawiyo noqdo goob ay ku sii wataan khilaafkii iyaga ka dhexeeyey. Tusaale ahaan maxaa laga fili karaa ciidammo ka socda Itoobiya iyo Eriteriya oo meel ka wada-shaqaynaya?
Ciidanka waddammada dariska ahi waxa ay inta badan qayb ka yihiin dhibaatada wadanka ka jirta oo inta badan ma noqon karaan xalka. Waddamadaasi waa kuwo horay u soo taageeray amaba abuuray kooxaha hubaysan ee hardamaya. Waxaana dhici karta in ay si toos ah u sii taageeraan marka ay waddanka soo galaan. Taasina waxay keenaysaa in waddamada deriska ahi ay ku dhex-milmaan kooxihii ay colaaddu ka dhaxaysay.
Waxaan tusaale ahaan halkaan kusoo qaadanayaa dhowr jeer oo ay wadammo isku dayeen in ay dhexgalaan wadamada dariskooda ah oo, kuwaas oo dhaamntood ku dhamaaday guul darro iyo dhiig badan oo daatay. Dhamaadkii 1987 ayaa ciidan kasocday Hindiya waxa ay galeen wadanka Sri Lanka taas oo ka dambaysay heshiis nabadeed oo dhexmaray dowladda iyo Tamil Tigerska oo ahaa jabhad la dagaalayey dowladda. Lixdan kun (60,000 ) oo kamid ah ciidamada Hindiya ayaa la geeyey Srilanka. Ciidankii Hindiya waxa ay markii dambe qayb ka noqdeen kooxihii dagaallamyey kadib markii ay la dagaaleen Tamilka. Hindiya waxaa soo dhexgaliyey arinta iyada oo gobol Hindiya kamid ah (Tamil Nadu) ay deggan yihiin dad Tamil ah. Ciidanka Hindiya waxaa lagu eedeeyey in ay sameeyeen kufsi iyo dil ay u gaysteen dadka shacabka ah. Ciidankaas 1990kii ayey ka bexeen Srilanka kadib markii ay ka dhinteen 1500 oo askari kana dhaawacmeen in ka badan 4500 oo askari. Arinkaasna waxa ay ku dhamaatay guul darro, dagaalkii Sri Lakana meeshiisii ayuu kasii socday. Hindiya dhibkii kaasoo gaaray dagaalkaas intaas kuma ekaan oo 1991dii Ra'iisul warsaarihii hore Rajiv Ghandi waxaa dilay nin Tamil ah, arrintaas oo raad ku leheed ciidankii Hindiya oo wadankaas la geeyey.
Sidoo kale, ciidamada galbeedka Afrika oo ay horkacayso Naigeria ayaa galay wadanka Liberia si ay nabad uga dhaliyaan. Ciidamada Nigeria waxa ay nogdeen qayb kamid ah kooxaha dagaallamayey illaa ay ka bexeen iyaga oo aan wax la taaban karo ka samayn xaaladdii murugsanayd ee Liberia. Ciidamada Nigeria waxaa lagu eedeeyaa in ay halkaas ka gaysteen dhac, bililiqo, dil iyo kufsi badan. Waxa kale oo ay aad uga faa'idaysteen gadidda dheemanta suuqa madow lagu gado oo wadankaas kasoo baxda. Ciidanka ay urur goboleedka Galbeedka Africa u direen Liberia oo ay u badnaayeen ciidan Nigerian ah waxa magacoodu ahaa ECOMOG . Dadka reer Liberia oo la yaabay sida ay u dhaqmeen ciidankaas la keenay dalkooda ayaa waxa magacii ciidankaas oo ahaa ECOMOG u badaleen �Every Car and Movable Object Gone�, taas oo ka turjumaysay sida ballaaran oo ay ciidamadaasi u biliqaysteen dalkaas. Qorshihii loo geeyey ciidanka wadankaas waxa uu isna ku dhammaaday guul darro. Soomaalidu maxay u bixin doonaan ciidanka IGADD haddii lageeyo Soomaaliya?
Hadda bal aan fiirinno waxa ka dhalan kara, haddii Soomaaliya lakeeno ciidan ka socda wadamada deriska ah gaar ahaan Itoobiya.
2.1 Ciidamada ka socda waddamada deriska la�ah Soomaaliya oo ay Ethiopia ku jirto xal ma noqon karaan?
Dowladda ugu awoodda badan wadamada safka hore oo xuduudka la leh Soomaaliya , haddana la sheegay in ay diyaar u tahay in ay ciidan usoo dirto Soomaaliya waa dalka Itoobiya. Wax garad badan oo Soomaaliyeed ayaa diidmo ka muujiyey in Ciidan waddamada safka hore ah lakeeno dalka. Itoobiya waxa ay kamid ahayd waddamaddii gumaysiga oo kala qaybsaday Soomaaliya qarnigii sagaal iyo tobnaad . Intaa kadibna waxaa labada waddan dhexmaray colaad dheer oo keentay in ay dowr jeer dhex marto dagaal ku saabsanaa dhulka Soomaali Galbeed oo ay Itoobiya haysto. Dagaalkii ugu dambeeyey waxa uu ahaa kii lagu hoobtay ee 1977dii. Waxaan halkaan ku eegaynaa doorka ay Itoobiya ka ciyaartay dhibaatada Soomaaliya hadda ka taagan.
Xilliggii ay Soomaaliya ka jirtay dowladda dhexe waxaa labada waddanba ka howl gali jiray mucaaradka wadanka kale. Nasiib darro markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, ma suurto galin in la dhiso dowlad dhexe oo awood leh oo booskeedii gasha. Ethiopia oo iyada ay u badbaaday dowladeedii dhexe ayaa waxa ay meesheedii ka sii waday cadowtinimaddii ay u haysay Soomaaliya, iyada oo hubka iskugu dhiibaysa Soomaalida. Itoobiya waxa ay aad ugu qasneed arrimaha gudaha oo Soomaaliya iyada oo ciidamadeeduna si isbada joog ah u soo galaan gobo kala duwan oo katirsan gudaha dalka Soomaaliya.
Itoobiya waxa ay marwalba abuurtaa koox Soomaaliyeed oo lagu burburinayo wixii wanaag ah oo Soomaaliya ka hirgala. Hubka ugu badan oo Soomaaliya soo galay inta ay jirtay dowlad la'aanta waxa uu ka immaanayey Itoobiya sida ay xaqiijiyeen khuburada Qaramada Midoobay. Itoobiya waxa kale oo ay ku dadaalaysay in Soomaaliya ayna ka dhalan dowlad dhexe oo xoog leh.
Haddaba su�aasha imaanaysa waxa ay tahay , macquul ma tahay in ciidamo ka socda Itoobiya ay soo galaan Soomaaliya si ay nabadda wax uga raadiyaan, Soomaaliyana dowlad u dhisaan? Taasi waa wax aan suurto gal ahayn. Itoobiya sida ay ku caddeeyeen bogga Internetka Wasaaraddaoodda Arimaha Dibadda waxa ay go'aansadeen in ay dagaalkii Soomaaliya kala dhaxayn jiray ay �Soomaaliya u qadaan� taas oo macneheedu yahay meesha lagu dagaalayo in ay noqoto Soomaaliya gudaheeda. Haddii ciidan Itoobiyaan ah la keeno waxa ay qayb ka tahay qorshaha dagaalka Soomaaliya loogu qaadayo. Waxa kale oo ay ku faanaan in ay ku guulaysteen in ay burburiyaan waxa ay ugu yeereen �Riyaddii Soomaaliweyn�. Taasi waa mid ay isku dayayso in ay ku xalaalaysato dhulka Soomaali Galbeed oo ay haysato. Arintaas waqtigeeda ayaa laga hadli doonaa, mana ahan arin weli xal loo helay. Haddii ciidan Ethiopian ah wadanka lakeeno waxaa imaanaysa in ay bilowdaan dagaallo ayna muuqan dhamaadkoodu. Inta badan Soomaalidu ma yeeli doonaan ciidanka Itoobiyaanka oo waxaa dhex mari doona dagaallo. Ujeedada ay Itoobiya Soomaaliya usoo galayso waa in ay ku aasto miinooyinkii waqtiyada soo sosca qarxi lahaa. Waxaa kale oo muuqata in wadan siyaasaddiisu tahay in dagaalka ay keento wadankayaga ayna qayb kanoqon Karin xalka.
Waxaa kale oo cad in ay adkaan doonto in laga saaro wadanka haddii ay mar saldhig ka samaystaan. Haddii dowlad aan weli isku haysanno dhul ay fursad u hesho in ay wadanka xoog kusoo gasho waxa ay si xoog leh u fara galinaysaa waaxaha kala duwan oo dowladda sida, sir doonka dalka iyo ciidamadaba oo u suurto galin doona in ay weligeed joogto dalka. Tusaale waxaa noo noqon kara, Suuriya oo lubnaan soo gashay xilligii dagaalka sokeeye ka socday in ayna jirin cid ka bixin karta maanta wadankaas.
Imaashaha ciidamadda safka hore waxa kale oo ay ay keenaysaa in Soomaaliya noqoto meel ay kusii wadaan dagaalkii iyaga ka dhexeeyey. Tusaale haddii Itoobiya soo gasho, waxaa iyadana imaanaysa Eritrea oo rabta in ayna Soomaaliya Itoobiya u gacan galin oo u noqon xulufo loo adeegsado. Taasna waxa ay keenaysaa in uu waddankayagu noqdo meel ay waddamada darisku ku dagaalaan. Arintan lamid ah waxa ay ka dhacday wadanka Congo oo ay si ba�an ugu hertameen oo ay cawaaqib keedii noqday in xalka dhibaatada Congo laga raadiyo wadamada dariska ah.
Dhinac kasta oo laga fiiriyo imaatinka ciidanka Itoobiya waxa uu sii fogaynayaa xalka Soomaaliya- taas oo ah ujeeddada ay Itoobiya ka leedahay Ciidamada ay Soomaaliya kula soo cararayso. Dadka qaar ayaa waxa ay ku doodayaan, waxaa wanaagsan in colaaddii u dhaxayn jirtay Soomaaliya iyo Itoobiya la illoobo oo hadda lays kaashado. Waxaa xaqiiqo ah in aan laga maarmin in waddamada dariska ahi nabad ku wada noolaadaan oo iskaashadaan. Laakiin taasi waxa ay imaan kartaa marka ay labada waddan wada hadlaan iyaga oo siman. Arintu hadda ma ahan mid sinnaan ah oo waddan kastaa fiirsan karo dantiisa ee waa mid lagu fiirinayo danta Itoobiya oo kali ah. Taasina ma ahan mid ay qaadan karaan dadka Soomaaliyeed.
Waxaa xusid mudan in qabqablayaasha ka soo horjeeda keenista ciidanka Itoobiya iyo kuwa ogolba ayna ka ahayn u danayn ay u danaynayaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed, laakiin ay ka fiirsanayaan danahoodda gaarka ah. Taas waxaa u daliil ah inta badan ragga hadda Itoobiya diiddan waa raggii ay Itoobiya adeegsanaysay markii ay rabtay in ay burburiso dowladdii KMG ee Carta lagusoo dhisay. Labada kooxood oo iskasoo hor jeedaa oo kuwada jira dowladda waxa ay isticmaaayaan dareen qabiil, shacabka Soomaaliyeedna waxaa la gudboon in aan mar kale lagu dhicin dabinkooda, aadna looga feejignaado xaasaasiyadda qabyaaladeed ee ay abuurayaan qabqableyaasha danahooda gaarka ah isaga soo horjeeda.
3. Gabagabo iyo talo soo jeedin
Waxaa muuqata in dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin in laga baxo goobadan qaabka daran oo lagu dul-wareegayo, oo laysku dayo in laga fakaro danaha qaranka Soomaaliyeed. Waxaa habboon in aan isku tashanno oo ay dowladdu ka shaqayso dib u heshiisiin buuxda. Waxaa muuqata in ciidan shisheeye uuna waxba ka qaban karin haddii uu dalka ku imaan hab heshiis ah. Dalabka iyo imaatinka ciidan ka socda wadamada dariska siiba Itoobiya waxa uu waddanka ku reebayaa dhibaato ay adkaan doonto in laga soo kabsado waqtiga soo socda. Waxaa laga yaabaa in aan laga maarmin ciidan shisheeye oo ka socda wadammo dhexdhexaad ka ah arimaha Soomaaliya, kuwaas oo ilaaliya xarumaha dhaqaalaha iyo dhismooyinka dowladda, markii la helo ogolashaahaha golayaasha dowladda. Waxaa kale oo cad in qaabka ugu sahlan oo hubka layskaga dhigi karaa in uu yahay mid ku yimaada is afgarad Soomaalida dhexdeeda ah.
Si ay noogu hirgasho dowlad shaqaysa waxaan soo jeedin lahaa talooyinka soo socda:
� In aan lagu dag dagin dalabka iyo keenista ciidanka shisheeye. Waa in marka hore ay isku racaan go�laha wasiiradda iyo golaha baarlamaanka lana qeexaa shaqada ay qabanayaan ciidankaas iyo waqtiga ay joogayaanba.
� Waa in laysku dayo in hubka lagu aruuriyo iyada oo gobol walba loo ogolaanayo in ay hubka u dhiibaan ciidan ka socda deegaankooda. Dowladda waa in ay awood ku yeelataa xullidda ciidankaas ka imaanaya gobol walba gudihiisa.
� Waa in la ogaadaa in ciidanka shisheeye uu xaalka caawin karo oo keli ah haddii ay heshiiyaan Soomaalidu, sidaas darteed waa in culaysa la saaraa sidii loo hirgalin lahaa dib u heshiishiin dhamaystiran.
� Haddii lagu heshiiyo in ciidan lakeeno dalka waa in ciidankaasi ka yimaadaa wadamo dhexdhexaad ka ah arimaha Soomaaliya.
� Waa in dhammaan laga saaraa qorshaha, oo aan marna la ogolaan keenista ciidan ka socda wadamada aan deriska nahay oo waqtiga dheer qaybta ka ahaa khilaafka Soomaaliya.
� Waa in loo arkaa in ayna suurto gal ahayn in ciidamada shisheeye kooxi u adeegsato in ay ku muquuniso kuwo kale, taas oo laga dhaxli karo cawaaqib xumo.
� Waa in shacabka Soomaaliyeed ka foojignaadaan in ay ku dhacaan dabinka hoos yaalla ee loogu soo qariyay caadifadda qabyaaladda, kaas oo ay isticmaalayaan kooxaha iskula jira dowladda oo iska soo horjeeda. Waa in la ogaadaa raggaan intooda badan waxaa hubaysay Itoobiya, ee waa in aan loo ogolaan in ay Soomaalida iska horkeenaan.
� Waa in indheergaradka ummadda sida Culumaa'uddiinka, hoggaamiye-dhaqameedyada, aqoonyahannada qaybaha kala duwan iyo dhammaan waxgaradka Soomaaliyeed ay ka gilgishaan xaaladda murugada leh ee ay maanta Soomaaliyi ku sugantahay gudaha iyo dibaddaba. Waana in ay ka fakeraan qorsheyaal wax ku ool ah oo ummadda iyo wadankaba looga badbaadinayo halisya haysta / ku soo fool leh.
W.Q: Ahmed A.M.Khayre , Rotterdam, The Netherlands
- Klaas van Walraven, The Pretence of Peacekeeping, ECOMOG, West Africa and Liberia 1990-1998, Clingendael Institute, The Hague, November 1999
- David Morris, �Keeping but not Making Peace�: The Peacekeeping force in Cyprus, St.Leonards, Australia, Allen& Unwin, 1994
- Amoo Sam G., Frustrations of Regional Peacekeeping: The OAU in Chad 1977-1982, fiiri, http://www.ciaonet.org/wps/ams01
- Royal Military College of Canada, Regional Peace Keeping is not the way, in: �Peacekeeping and International Relations, vol.27, no.2, July-October Issue, Pearson Peacekeeping Centre, Nova Scotia (Canada), 1998
- Ethiopia�s policy towards Somalia, Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia, fiiri: http://www.mfa.gov.et/Foreign_Policy_And_Relation/Relations_With_Horn_Africa_Somalia.php
Faafin: SomaliTalk.com | Feb 3, 2005